Ghrelin, isebenza njani ihomoni yokulamba? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukunciphisa umzimba kunokuba nzima, kodwa ukugcina ubunzima emva kokutya kunzima kakhulu. Uninzi lwabantu lubuyisa uninzi okanye bonke ubunzima obulahlekileyo kunyaka nje omnye. Kwaye, ukubuyisa kwakhona ubunzima kuyinxalenye yokutya komzimba kunye neehomoni ezilawula indlala, ezizama ukugcina kunye nokufumana kwakhona amanqatha.
UGhrelin, "i-hormone yendlala," idlala indima ebalulekileyo kule nkqubo, njengoko ibonisa ukuba ingqondo itye. Amanqanaba aphakama ngexesha lokutya okuthintelayo kwaye aqinise indlala, okwenza ukuba ubunzima bokunciphisa umzimba bube nzima.
1 Yintoni ighrelin?
2 Yintoni ebangela ukwanda kweGhrelin?
3 Amanqanaba atshintsha njani ngexesha lokutya
4 Uyinciphisa njani iGrelin kunye nokunciphisa indlala
IGhrelin yincindi yedlala eveliswa ikakhulu ziiseli zesisu kunye nepancreas. Ihlala ibizwa ngokuba yihormone yendlala kwaye ngamanye amaxesha i-lenomorelin.
Le hormone ifihlwa xa isisu singenanto. Ingena egazini kwaye ichaphazele indawo ethile yengqondo eyaziwa ngokuba yihypothalamus, elawula iihomoni kunye nomdla wokutya. Uhamba ungena egazini uye kufika kwingqondo, apho uxelela umzimba ukuba ulambile kwaye ukhangele ukutya. Owona msebenzi uphambili we-ghrelin kukwandisa umdla wokutya. Yenza umzimba utye ukutya okuninzi, utye iikhalori ezininzi, kunye nokugcina amafutha.
Le hormone iveliswa kufutshane nokutya kwesiqhelo kwaye ngexesha lokuzila ", uyachaza usosayensi u-Ana Paula Pujol, waseSanta Catarina. “Ineziphumo ezincomekayo ekucoleni ukutya nasekufunxweni kwezakha mzimba, kuba ikhuthaza ukuhambisa kwamathumbu, isisu se-gastric acid, i-endocrine kunye ne-exocrine secretion evela kwi-pancreas.
Ukongeza, ichaphazela umjikelo wakho wokulala, indlela yokuziphatha efuna umvuzo, incasa yokuziva, kunye ne-carbohydrate metabolism.
Amanqanaba aphezulu aphezulu, uya kulamba ngakumbi. Amanqanaba asezantsi, umzimba uya kuziva wonwabile.
Ke ngoko, kwabo bafuna ukunciphisa umzimba, ukuthoba amanqanaba abo e-ghrelin kunokuba luncedo. “Ke ngoko, ukutya xa ulambile kuyimeko yomzimba efanelekileyo. Yiba neshedyuli yesiqhelo yokutya ukuze ulawule 'iiwotshi zebhayiloji' kwimveliso yeghrelin nayo, ”yatsho ingxelo yezempilo.
Yintoni ebangela ukwanda kweGhrelin?
Amanqanaba eGrelin ahlala enyuka ngaphambi kokutya, xa isisu singenanto. Emva koko ziyancipha kungekudala emva koko, xa isisu sigcwele. Le yimpendulo yendalo yomzimba, ethi izame ukukhusela kwindlala.
Ngexesha lokutya okuthintelweyo, ukutya kuyenyuka kunye namanqanaba "e-satiety hormone" ehla nge-leptin. Izinga lokunciphisa umzimba lihlala lihla kakhulu, ngakumbi xa iikhalori zithintelwe ixesha elide. Olu hlengahlengiso lunokwenza ukuba ukunciphisa umzimba kube nzima kakhulu. IiHormone kunye nemetabolism zihlengahlengisiwe ukuzama ukubuyisa bonke ubunzima obulahlekileyo.
Amanqanaba atshintsha njani ngexesha lokutya
Ngosuku lokuqala lokutya, amanqanaba e-ghrelin aya kuqala ukwanda. Olu tshintsho luyaqhubeka iiveki. Isifundo esivela kwiSebe lezoNyango kwiYunivesithi yaseWashington eMelika sifumene ukonyuka ngama-24% kumanqanaba amaGrike kubantu abalandela ukutya kangangeenyanga ezintandathu.
Uhlolisiso olwenziwe kwiYunivesithi yasePennsylvania State, nalo eUnited States, lwalandela la mavolontiya kwisidlo seenyanga ezintathu. Abaphandi bafumanise ukuba amanqanaba e-ghrelin aphantse aphindeka kabini-ukusuka kwi-770 ukuya kwi-1,322 pmol / ilitha.
Olu kunye nolunye uhlalutyo lubonisa ukuba kokukhona utya ukutya kunye nokutya okuninzi komzimba kunye nezihlunu, uya kuba phezulu amanqanaba akho.
Uyinciphisa njani iGrelin kunye nokunciphisa indlala
I-Grelin ibonakalisiwe njengehomoni engenakulawulwa ngokuthe ngqo ngamayeza, ukutya, okanye izongezo. Nangona kunjalo, kukho ezinye iindlela zokunceda ukugcina amanqanaba asempilweni:
Kuphephe ukutyeba kakhulu. Ukutyeba kakhulu kunye neanorexia ziguqula amanqanaba esiGrike;
Ukulala kubalulekile. Ukungalali kakuhle kuphakamisa amanqanaba kwaye kunxulunyaniswa nokwanda kwendlala kunye nokuzuza ubunzima;
Yandisa ubunzima bemisipha. Amanani aphezulu amafutha okanye izihlunu ezikhululekileyo anciphisa le hormone;
Yitya iiprotein ezininzi. Ukutya okunotye kakhulu kwiiprotein kwandisa ukutyeba kwaye kunciphisa indlala. Enye yeendlela zokwenza oku kukunciphisa i-grelin;
Gcina ubunzima obuzinzileyo. Ukutshintsha kobunzima obukhulu kunye nokutya "yo-yo" kuphazamisa ukusebenza okufanelekileyo kwehomoni.